မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Top (5) ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့ပြတွေရဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအဆောက်အဦးတွေကို တည်ဆောက်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ။
ဒီလိုများပြားလှတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေထဲကမှ မတ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ ZoomInfo ကနေ စာရင်းပြုစုထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေထဲကမှ ဝန်ထမ်းအများဆုံး ကုမ္ပဏီ (၅) ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Naing Group Capital
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၄၀၀ ကျော်နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ Naing Group Capital ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာသာက ASEAN မှာပါ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Naing Group က Condominiums Project ပေါင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ လက်ရှိမှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုလည်း မှန်ပါတယ်။
၂။ Max Myanmar Construction Co., Ltd.
Max Myanmar Construction Co., Ltd. က ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဆိပ်ကမ်းတိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်း (Earthworks)၊ ရေကာတာနှင့် ရေလှောင်ကန်များ၊ စီးပွားဖြစ် နှင့် လူနေထိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများ၊ အထက်အမြင့်အဆောက်အဉီးများ၊ စက်ရုံများ နှင့် ဟိုတယ်များစတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးကို အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၂၀၀ နီးပါးနဲ့ ပရော့ဂျက်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ထမ်းအများဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ စာရင်းမှာ ဒုတိယနေရာကနေ ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ New Star Light Construction Co., Ltd.
New Starlight Group (NSL) က မန္တလေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း အဆင့်မြင့် အိမ်ခြံမြေနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းရဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၁၀၀ ကျော်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၄။ The Nippon Road Co., Ltd.
The Nippon Road ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၈၀ လောက်ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလောကကို ကြီးစိုးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ လူသိများကြပါတယ်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ The Nippon Road Co.,Ltd. ဟာ ကုမ္ပဏီခွဲပေါင်း ၁၀ ခု၊ ရုံးခန်းပေါင်း ၁၀၂ ခု၊ Asphalt Mixture Centers ၈၉ ခု၊ Overseas Office ၃ ခုနဲ့ Subsidiaries ၄၃ ခုရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Branch ကို Sakura Tower မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ထမ်းအများဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ စာရင်းမှာတော့ ၄ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ The Zenitaka
The Zenitaka ကုမ္ပဏီက ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၇၀၅ ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၈၇ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုစက မှာ ကုမ္ပဏီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ၁၉၈၄ မှာ ဖိလစ်ဖိုင်နိုင်ငံ၊ ၁၉၉၃ မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ၁၉၉၉ မှာ အာဖရိက၊ ၂၀၀၂ မှာ ဗီယက်နမ်၊ ၂၀၁၂ မှာ ဟိုချီမင်းမြို့နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Myanmar Branch ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ Myanmar Branch မှာတော့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၉၀၀ ကျော်နဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်ပတ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ထမ်းအများဆုံး ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ နံပါတ် ၅ နေရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။
Local Read 745 times